MUUQAAL: Somaliland oo ka hadashay Daminta Xiisada Tukaraq, “Weli Dagaal Noocan ah Maanu Arag” (Muuqaal) | KALSHAALE
MUUQAAL: Somaliland oo ka hadashay Daminta Xiisada Tukaraq, “Weli Dagaal Noocan ah Maanu Arag” (Muuqaal)
Hargeisa ( Kalshaale ) Wasiirka Arimaha debedda ee Somaliland Sacad Cali Shire oo Warbaahinta kula hadlay Hargeysa, ayaa ka Warbixiyey Halka ay marayso dhexaadinta Beesha caalamka ee xiisada dagaal ee Tukaraq, Taasi oo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland.
Wuxuu sidoo kale xusay inuu dagaalkani yahay mid aan Noociisu horey u dhexmarin labada dhinac Isagoo ka digay Dhibaatooyinka laga dhaxli doono. “Dagaal Noocan ah, oo Sidaas u Abaabulan, Wuxuu ina Marin doonaa Jid aan wanaagsanayn, Waxaan dadka Hurinaya ugu Baaqayaa inay Joojiyaan” ayuu Yidhi Sacad Cali Shire.
Dhinaca kale wuxuu ka hadlay Isbadalka uu Samaynayo Dhinaca Siyasaadda ee uu Samaynayo Raysal Wasaaraha Cusub ee dalka Itoobiya.
Walee sacad runbuu sheegay Wali dagaal tolaay laleeyahay manaan arag show puntland du waxjiraba may ahayn
Oo baho xabasho oo labo dhinac ah oo isagu ka mid yahay ayaa hurinaya ee wa ayo dadka loogu baaqi inay dagaalka joojiyaan.
Labo kooxood oo maryo calas ah oo xaaraan ku naax ah ayaa meesha ku dawarsanaya.
Rabana inay waxoogaa ku helaan dagaal ayaa meesha ka socda.
Waxayna ogeyn in maanta aduunku hal xaafad yahay oo la iska wada warhayo.
Hadaan suaal ku weydiiyo waxaad noosheegteen inaad 30 sano ka hor dawlad noqoteen maxaa kalifay inaad 30 kaa sano gaadhi weydeen xuduudihiinii?
Hadaad tagi weydeen intii aduunku kala qarsoonaa ma u malaynaysaa inaad maanta oo la iswada arko taageysaan?
Mase la dhihi karaa waa dhamaadkii waxa loogu yeedho somaliland?
Waxaan filayaa qof kasta oo ilaahay caqli siiyay marka uu wasiirka hadalkiisa dhegaysato uu fahmayo ujeedaa hadalkiisa.
Wasiirku waxa uu si diblumaasiyad qa muuqato u sheegay lana yaabay dagaalka tolaayeey yaa daaroodaay.kkk
Afkiisa ayuu kala xishooday inuu si qof shacbiya u hadlo.kkk
Markaa Cinwaan yar oo la bedelo wax uu nuxurka hadalka wasiirka u dhimayo ma jidho😀
Si degana wasiirku waa u hadlay, maraa waaxid.💪💪💪
Ciidanka Somaliland halkiisii buu joogaa, kuwii laha maalinta ciidka waxaa ku tukanaynaa Laascaanood. Bal horta soo dhaafa Godqaboobe iyo Tuka Raq.
@ Xaange sxb adigu ha wee werin dagaalka hadaan ku qabto walee anaa ku sii daynaya.kkk
Hayaay yaa daaroodaay!!!
Iyo dagaal aan dhamaanayn, hadana aan 3 saac u adkaysanayn adeer kala saara.kkk💪💪💪
Kuwaan iidoor waa iga qosliyeen!! Yaa isaaqeey ayadu ma caadibaa? Tan kale saw adinkii qaranka sheegtay waa maxay ilaa wajaale baa xoolo iyo lacag la soo aruurinayaa. Aaway canshuurtaa dad ka ka qaadi jirteen. Harti dhulka asagaa leh hadduu tolaay dhaho iyo haddii kalaba.
Dagaal kaan oo kale lama arag kuye. Ma dhul uusan lahayn buu rabay inuu nabad ku joogo. Yaa is gaaray wali.
Idoor calaacalkiiwaka dhamaday kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Walhi sidaan wadkeyga uhubo ayaan uhubey malinta puntland dagal qaado inan idoor sheganeyn qaran wakaas maanta Dirooow iyo irriroow ayuuku washey waxna matari karaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Idoorow dalbo cida ikaa celin kadha xitaa rer galbeedki maanta casan ayaan utaagay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sacad ali shire dagaal noocana waliga maad arkin 2 dharbaaxo aayadla qeylineysaan bal aan aragno marka dagaal biloowdo ayaan arkeynaa maanta cidna waxba laweydiin mahayo xitaa horgalda cagtanu marineyna viva puntland kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
19 sano ayaa Puntland, Somaliland koobi garanaynaysay. Hal maalin ayaanu idin copy garaynay ee Miyaad u adkaysan wayday.
Shacabka Somaliland waa ogyihiin in ciidankoodu
Dhaqaale iyo saanadba haysto.
Laakiin markay arkeen Puntland qayladhaankeeda hayaay yaa tolee, bay iyana fecil celin keeneen, ciidankoodana tusayaan inay taageerayaan!😀😀😀
Wanku salamey odey.Naago layskii waxaadku dartay afduub kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Waar jiidi waxba maka qaban weydeen maxaad maatadi ugu hoos laabateen ceeb caleeek horey ayaan u ogeyn inedyan 3 maalin dagalami karin o olyada iyo biyaha isku dareysaan awey qarankiiiii Anigaa cirka u eegey kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Anigu midna maxsana yan leeyahay wayo waxa labada dhinac ku dhimana yaa wa muslin iyo dhalin yaro somaliyeed putlanda tollay bay kuso gelinasaa somaliland raadkii gumastaha yaan racana labaduba way ku ceebaysan yihiin aakhiro iyo aduunkaba waxaase ka liita illahey hore tii kuwa dhinacyada kala taageeraye ee aan garanan nimankan dhiiga ka macaasha inta ay addunyadajogan indha la aan haku raacin dhulna kaqasan mayan ee maydad ay kala sitan bay so kordhina yan wa kaa arigti daydu
Asc dagaalkani waa dagaal 2 qabiil waayo isaaq markii horeba waa wada socdey oo tolaayeeydiisu waxay soo socotey sodon sano kahor hartina haduu is raacay marka mawuxu layaabay hartiga aan is raaci jirin oo hada is raacay ileyn isaaqba wuu wada socdaaye aarka iyo laaleys baan kasugayaa jawaab saxa
Somaliland Dal ma aha la aqoonsanyahay mana laha xuduud la aqoonsanyahay sidaas darteed wuxuu ninkani Ku doodayaa waa been
Qaali dhaaftay dhul dad kale degan yahayna
Gibir baan Ka qaadayaa ma aha Dow markaa waxaan Oran lahaa ciidamadiina waa in ay tagaan xuduuda sool iyo togdheer puntland ciidamadiina yaanay Garoowe soo dhaafin. Ka dibna dhulbahante uu Ka shiro aayihiisa
Go,aana Ka qaato waxay samay lahaayeen..waana inay cod Ku Kala baxaan oo Somaliland iyo puntlandna Ku ixtiraamno
Go,aankooda haddii uu qancin waayo iyo haddii Kaleba haddii aan sidaa la yeeli
Hadhow yaan la shalaayin miraha laga gurto
Colaad raagta oo aan waxba laysula hadhin
Meesha la yidhaa Somaliland – waa meel beeenta lagaga nool yahay.
Dadka waxaa lagu xidhaa inuu xamar tagay iyo wax noocaaasi ah,laakin lacagta xamar laga soo diro eeyarbay qaataan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hadda Formaajo ayaa lacag u soo diraya Somaliland.misana waxay ku odhan – waan go’nay oo gaar ayaan nahay.
Dawlada Pudland ayaa yaabtay.
Daahir Calasow ayaan hadalkan ka iibsaday.kkkkkkkkkkkkkkkk
Kolkol ayuu Mr Calasow iga qosliya.
Kuye, lacagta ay dawlada Somaliya soo dirto eeyar ayay iska qaataan,masaakiintana waxaa lagu xidhaa maxaad xamar u tagtay .
Xaq bay u meedahay jam somland inay xidho cidii lid ku ah qaranimadeeda una jppjinmayso inay gacan bira ku qabato ama erido
Dhamaan waxaan hanbalyada iida arafo salaamayaa shacabka jam somland iyo kuwa caalamka islaamka ah qaranimada jam somland aa in la ilaaliyo iidan iideeda kalana ku gaadha barwaaqo iyo bashbash ummadda jam somland